यस्तो छ मन्त्रालयको अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापनको कार्ययोजना – EducationPati – A complete news portal on Education in Nepal
२१ जेष्ठ २०७७, बुधबार अस्थायी शिक्षक, शिक्षा मन्त्रालय
काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापनका लागि नयाँ कार्ययोजना अघि सारेको छ । अस्थायी शिक्षकहरुको व्यवस्थापनका लागि झण्डै २८ हजार दरवन्दीमा खुला र आन्तरीक गरी चार किसिमका परीक्षा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको तयारी रहेको छ ।
पहिलो चरणमा अस्थायी शिक्षकहरुको दरवन्दी विवरण संकलन गर्ने, त्यसपछि उनीहरुलाई परीक्षा दिने या सुविधा रोज्ने भनेर एउटा फारम भर्न लगाउने र त्यसपछि मोटामोटी आएको तथ्यांकको आधारमा सुविधार परीक्षाको प्रकृया शुरु गर्ने मन्त्रालयको योजना रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले जानकारी दिए ।
अस्थायी शिक्षक विवरण
मन्त्रालयले शिक्षा विभाग मार्फत अस्थायी शिक्षकको विवरण संकलन सुरु गरिसकेको छ । शिक्षा विभागले पनि सवै जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुलाई अस्थायी शिक्षकको संख्या र विषयगत दरवन्दी पत्ता लगाई पठाउन निर्देशन दिइसकेको छ । केहि जिल्लाहरुबकाट त्यस्ता विवरण समेत आइसकेका छन् । केहि जिल्लाहरुबाट भने विवरण आउन ढिलाई भएको विभागले जनाएको छ । सवै विवरण आइसकेपछि बल्ल अस्थायी शिक्षकको संख्या र विषयगत दरवन्दी पत्ता लाग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
रोजाई फारम भराउने
शिक्षा विभागले अस्थायी शिक्षाको दरवन्दी विवरण आएपछि फेरी उनीहरुलाई परीक्षामा सहभागि हुने या सुविधा लिएर बिदा हुने भन्ने एउटा रोजाई फारम भराउने भएको छ । विभागले जिशिकाहरु मार्फत हरेक अस्थायी शिक्षकलाई यस्तो फारम भराउन लागेको यो । यो फारम आएपछि बल्ल मोटा मोटी रुपमा कति शिक्षकले परीक्षा दिने र कति शिक्षकले सुविधा लिएर बिदा हुन्छन भन्ने तथ्यांक आउने मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यो तथ्यांकको आधारमा कति संख्यामा विज्ञापन गर्ने र सुविधा लिएर बिदा लिने शिक्षकलाई आर्थिक स्रोतका लागि अर्थ मन्त्रालयमा माग गर्ने मन्त्रालयको तयारी रहेको छ ।
२८ हजार विज्ञापन खुलाउने तयारी
मन्त्रालयले उमेर समुहको आधारमा विश्लेषण गर्दै झण्डै २८ हजार दरवन्दीमा विज्ञापन खुलाउने तयारी गरेको छ । तर यो संख्यामा घटबढ हुनसक्ने मनत्रालयका प्रवक्ता डा. लम्सालले बताए । यो संख्या भन्दा बढी र घटी जे पनि हुन सक्छ । लम्सालले भने । शिक्षामन्त्री आएपछि विज्ञापनको प्रक्रिया अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।
२० पुस २०४९ भन्दा अघि अस्थायी नियुक्त भई अहिलेसम्म नियमित रूपमा सेवा गरिरहेका शिक्षककाको संख्याका आधारमा आन्तरिक विज्ञापन हुने भएको छ । उनीहरुको संख्या पत्ता लगाएपछि उनजहिरुको टाउको गनेर त्यहि संख्यामा विज्ञापन खुलाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । यि विज्ञापनमा प्रतिष्पर्धा गर्ने हरेक शिक्षक उत्तीर्ण अंक ४० ल्याए उनीहरु स्वतः स्थायी हुनेछन् ।
आन्तरिक परीक्षामा सहभागी नभई सुविधा लिन चाहने शिक्षकहरुकालागि ऐनले निम्न लिखीत सुविधाहरु तेकेको छ । उनीहरुले,पाँचदेखि १० वर्ष सेवा गरेका भए काम गरेको प्रत्येक वर्षको अन्तिम महिनाको आधा महिनाको तलबबराबर हुन आउने रकम दिने व्यवस्था छ । त्यसैगरी, १० देखि १५ वर्षसम्म सेवा गरेका शिक्षकका लागि उसले काम गरेको प्रत्येक वर्षको अन्तिम एक महिनाबराबर हुन आउने रकम र १५ वर्षभन्दा बढी सेवा गरेको शिक्षकलाई उसले काम गरेको प्रत्येक वर्षको आखिरी डेढ महिनाको तलबबराबर हुन आउने रकम दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
२०७३ भदौ ८ गते